I-Studio-Apartment ngasolwandle (Eugenio Turizam 2+1)
Soline, Zadar County, i-Croatia
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Eugenio
I-Studio-ifulethi eduze kolwandle e-Soline (Dugi Otok).
Iphelele abathandi bokuphumula kanye nemvelo. Ukubuka okumangalisayo kokushona kwelanga!
I-Soline iseduze kakhulu ne-Saharun Beach, i-Veli Žal Beach, i-Veli Rat lighthouse, nakwezinye izindawo ezinhle esiqhingini. Isuphamakethe, ibha yekhofi nesitobhi sebhasi ebangeni lokuhamba ngezinyawo.
Studio-ifulethi ngasolwandle. Ukufinyelela okuzimele, umbhede ophindwe kabili, ikhishi elihlomele, igumbi lokugezela langasese elineshawa. Okunye okutholakalayo yitafula elingaphandle elinezihlalo engadini, ishawa yangaphandle nendawo yokosa inyama.
Indawo yokupaka mahhala phambi kwendawo. Ababungazi abanobungane.
Enye yezindawo ezimbalwa esiqhingini ezinengadi, lapho ungajabulela khona ukushona kwelanga okuhle!
I-Soline iyidolobhana eliseduze nolwandle oludumile lwaseSaharun (10min ngezinyawo). Indawo ethule kakhulu olwandle olucacile, ebonakala ngamaphunga emvelo engonakalisiwe.
I-Soline inemakethe encane, ibha yekhofi, indawo yokuphumula, nesitobhi sebhasi. Itholakala endaweni yamasu: eduze kwaseSaharun beach (10 min ngezinyawo), i-Veli Rat lighthouse (5 km), Božava (3 km), Veli Žal beach (10 km) kanye neBrbinj exhunywe eZadar ngesikebhe ( 18km)
Hlola ezinye izinketho ezise- Soline namaphethelo